Qubanayaal Sports oo goos goos ah – SBC
Qubanayaal Sports oo goos goos ah
Arsenal oo rajo ka qabto xagsashada captain Robin Van Persie
RVP xiligan waa shumac ka shidan Emirates Stadium
Tababaraha kooxda Arsenal ee ka dhisan waqooyiga magaalada Londonr Arsene Wenger is ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in uu heshiiska uu kula joogo kooxda captian Roben Van Persie uu kordhiyo, isla markaana uu saxiixo heshiis cusub.
Van Persie oo 28 sano jir ah wuuxu sagaal gool dhaliyey 13 kulan oo ay xili ciyaareedkan ciyaartey kooxda Arsenal, waxaana heshiiskiisu uu dhamaanaya bisha July 2013, taasi oo macneedu yahay in hadii aanu heshiis cusub saxiixin in xagaaga dambe ay qasab ku tahay in la gado oo lacag laga sameeyo ama uu July 2013 iska baxo oo bilaa faa’ido uu u aado meel kasta oo uu doono.
Kooxda qorileyda (Gunners) wali si rasmi ah uma xaqiijin in ay wadaxaajood la bilow RVP, kaasi oo ah ciyaaryahanka kaliya ee xiligan ka mid ah Arsenal ee koob la qaaday kooxda.
“Waxaa u dhiman 18 bilood oo heshiiskiisa ah, waxaanse ku qabaa kalsooni in uu saxiixi doono heshiis cusub, mar kasta taasi kalsooni ayaan ka qabaa” ayuu yiri Wenger.
Arsenal ayaa la sheegay inay ku mintidid doonto laacibkooda, ka dib markii ay ka tageen kooxda ciyaaryahanada Samir Nasir, Cesk Febregas, iyo Gale Clichy xagaagii dhaweyed ee uu furnaa albaabka kala iibsiga ciyaartoyda.
Laakiin tababaraha Arsenal ayaa dhamaadkii kala iibsiga ciyaartoyda ee aanu xirmin albaabka wuxuu kooda keenay Yossi Benayoun oo amaan uu ka soo watey Chelsea, Mikel Arteta, Ju-Young Park , iyo difaacyada Per Mertesacker A Santos.
Sir Alex Ferguson oo baadi goobaha dhex u badasha laacibkii Scholes
Macalinka kooxda Manchester United ayaa toos lix qaad ah wuxuu ku raadinaya ciyaaryahan u dhiga Paul Scholes oo dhexda Man United maamula taasi oo uu mudo waysanaa Sir Alex
Ka dib markii dharbaaxo culus todobaadkii hore ka soo gaartey Man United kulankii guriogeeda ay ku martigalisay gurigeeda Old Trafford kooxda ay isku magaalada ka dhisan ee Man City wuxuu tababare Sir Alex uu bilaabay in uu ka fakaro sidii ciyaaryahan tayo sare leh uu keeno dhexda.
Sir Alex ayaa la xaqiijiyey in uu haatan boorsada lacagta gacanta galiyey uuna miiska soo saarey in ka badan 60 milyan oo doolar, isagoo miiska lacagtaasi u saarey kooxda Benfica ee ay isku group-ka yihiin Champions League-ga sanadkan ee lagu magacaabo Nicolas Gaitan.
Gaitan wacdaro ayuu ka dhigay bishii hore Old Trafford
Nicolas Gaitan ayaa todobaadkii hore kooxda Benfica waxay ku abaalmarisay heshiis cusub oo shan sano ah, laakiin macalin Alex wuxuu la dhacay qaab ciyaareedka kubad qaabeeyahaasi wuxuuna isha ku qabtey kulankii bishii hore ka dhacay garoonka Old Trafford.
Laakiin kooxaha Inter Milan & Paris St Germain ayaa iyaguna rucle ugu jira sidii ay ku xero gashan lahaayeen ciyaaryahankan oo reer Argentine ah isla markaana bisha February ee sanadka soo socda 24 sano jir noqonaya.
Gaitan ayaa mustaqbalkiisa ciyaareed ka soo bilaabay kooxda Boca Juniors laakiin sanadkii 2020-kii ayuu ugu soo wareegay kooxda Benfica heshiis ku kacaya 11.1 milyan oo doolar.
Inkastoo Gaitan uu haatan kooxda Benfica uga ciyaaro garabka bidix hadana caadiyan wuuxu ka ciyaara door ah in uu ka dambeeyo weeraryahanka, doorkaasi oo ay la dahay United tan iyo ciyaaro ka fariisigii Paul Scholes.
Wesley Sneijder oo mudo ayuu ku jiray shaashada Sir Alex
Sir Alex waxaa kale oo uu isha ku hayaa kubad qaabeeyaha kooxda Inter MilanWesley Sneijder kaasi oo ay dhici karto in kooxda Inter ay aqbasho in uu ka tago garoonak San Siuro si ay u hesho dhaqaale ay ku soo xero galiso ciyaar yahanka Eden Hazard.
Sidoo kale M United waxay eeganaysaa xidiga khadka dhexe ee kooxda Athletic Blibao ‘s ee Spain u ciyaaraUnder 21-ka, Javi Martinez kaasi oo laga yaabo in uu ku kaco aduun lacageed oo gaaraya 30 milyan oo doolar, iyo waliba xidiga kale ee reer Argentine Lucas Biglia ee u ciyaara kooxda Anderlecht ee dalka Belgium.
David Silva oo muraayadaha ka dalacdey Real Madrid & Bareclona
Xidiga ifaya xiligan kooxda la loodin la’ yahay ee Manchester City David Silva ayaa muraayadaha ka dalacday oo waxba ka soo qaadin dalabka ka soo yeeraya kooxaha ka dhisan dalkiisa ee xiligan kubada cagta aduunka ugu horeeya ee kala Barcelona & Real Madrid.
Samada sare David Silva oo xiligan ka iftiimaya Etihad Stadium
Silva ayaa sheegay in uu ku qanacsan yahay kooxda boorsooyinka lacagta la wareegaysa ee Man City, waxaana uu sheegay inaanu u hanqal taageyn dalabka Real & Barca isla markaana uu la joogi doono Man City oo xiligan hogaanka haysa hogaanka Premier League-ga ka dib markii ay ku bilowdey 100% heer ah.
David Silva wuxuu xiligan la wadaagaya guulaha kooxda Man City oo tii ugu dambeysay ee Premier League-ga ay dhulka ku jiideen kooxda Man United.
“City way i rumeysan tahay, halkan ayaana ku ahay heer sare” ayuu yiri Silva oo sheegay in inkastoo Barcelona & Real Madrid yihiin laba kooxood oo waa weyn, hadana uu ku qabacsan yahay la joogitaanka City mudo sanooyin ah.
Cabbdifatax Mowliid Xaaji